I-OEM / i-ODM-iShenzhen PUAS yeZimboni Co, Ltd.
Iinkonzo zokwenza ngokwezifiso ze-OEM / ODM
I-PUAS ijolise kuphando kunye nophuhliso lwetekhnoloji ye-imaging ephezulu yokucacisa ividiyo, ubuchule bokulungiswa kwemifanekiso, uyilo oluhlanganisiweyo lwesekethe, uyilo lwezixhobo zokusebenza, uyilo lwembonakalo ye-PTZ.
Ngophando lwenzululwazi olomeleleyo kunye neqonga lophuhliso, sinika i-HD ividiyo yenkomfa yokufumana imifanekiso, iinkqubo zemfundo, kunye nomgama we-HD ividiyo yenkomfa yeenkomfa. Zama ukuba yinkokeli yehlabathi kuphando kunye nasekuphuhliseni ukufunyanwa kwemifanekiso yevidiyo kunye nesiphelo sendlela.
I-PUAS inesakhono se-R & D kwisoftware ukuya kwizixhobo zekhompyutha, inokubonelela ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso. Ngokusekelwe kumava okuphanda kunye nokuphuhliswa kwekhamera ye-PTZ, i-PUAS iya kusungula ividiyo ye-4K kunye nezisombululo ze-3CCD zevidiyo.
I-Skype Imeyile 0755-88361222
Elungiselelweyo ityala imveliso
Akukho mxholo, nceda ulinde ... okanye qhagamshelana nathi!